China PDQ na-echekwa ọkara okpokoro Ngosiputa maka ndị na-ere ahịa Walmart | Raymin
Nọmba nlereanya: GFPD20200705
Nha: W48 `` x D20 '' x H48 ``
ihe onwunwe Ike B ọjà + 350gsm CCNB
Mbipụta: Mbipụta akwụkwọ CMYK
Agba ikpeazụ: Kenkowaputa Varnish
Ebe Mmalite: CN
Brand aha: Ihe ngosi Raymin
Asambodo: SGS, ISO, BSCI
Opekempe Iwu ibu: 100pcs
Ahịa: Lelee anyị
Nkwakọ ngwaahịa nkọwa: Mgbakọ jupụtara na ngwaahịa
Oge Mbuga ozi: Daysbọchị 15 maka ≤5,000pcs
Ihe nlele na-eduga oge Daysbọchị 3
Ihe nlele 150 $, kwụghachi mgbe usoro iwu kwadoro
Kwụ Tergwọ Okwu: L / C
Tụkwasịnụ Ikike: 100,000 PC kwa izu
Nhazi usoro Ọkara ngosipụta ngosipụta
Nka / eserese Ngwaahia
Artdị nka PDF, Ai, PSD, PS
Otu ụzọ iji dọta uche ndị ahịa bụ na mbipụta dị mma na ngosipụta gị. Enwere ike ime nke a site na igosi akara ngosi ụlọ ọrụ gị, gosipụta akara ngosi gị ma ọ bụ ịkọwapụta ngwaahịa a n'ụzọ dị mma. Ma ị na-ahọrọ ngosipụta nke ala, ihe ngosi mkpọsa mkpọsa ma ọ bụ ihe njide broshuọ, ngosipụta kaadiboodu edepụtara nwere ike ibute ahịa dị elu. A na-amata ngosipụta nke ịzụta (POP) iji nye nnukwu nloghachi na itinye ego. Cingtụkwasị ngosipụta mara mma ma na-egosipụta ngwaahịa na-egosipụta gburugburu ụlọ ahịa gị yana ndenye ọpụpụ na-enyere aka dọta anya ndị ahịa gị na ngwaahịa gị. Anyị na-enye ọtụtụ ụdị mbipụta iji gboo mkpa ndị ahịa anyị. Site na ike anyị dị iche iche dị iche iche, ị nwere ike ịhọrọ ụdị nke ga-adabara adaba maka mkpa ngosi na mmefu ego gị. N'agbanyeghị ụdị nke ị họọrọ, ị nwere ike ịtụ anya ihe kachasị mma na ngwa anyị dị elu yana ndị ọkachamara njikwa agba agba na saịtị.
Ike anyị gụnyere:
1) mama Printing: Iji nweta foto-edu ebi akwụkwọ, anyị ga-ebipụta gị elu-mkpebi eserese ka akwụkwọ, nke a na-ahụ ndokwasa corrugated osisi. Usoro a na-eji izute gị adịchaghị elu-edu ebi akwụkwọ mkpa.
2) Flexography: Thisdị mmefu ego a na-emefu ego na-agụnye ibipụta akara ngosi gị ma ọ bụ ọrụ gị ozugbo na bọọdụ corrugated. Nke a na-agụnyekarị otu na agba atọ. Nke a mmefu ego-enyi na enyi ịke na-agụnye na-ebi akwụkwọ gị logo ma ọ bụ nkà ozugbo na a corrugated osisi. Nke a na-agụnyekarị otu na agba atọ.
3) Dijitalụ: N'oge usoro a, anyị na-ebipụta agba agba agba ozugbo na bọọdụ corrugated maka ngwọta bara uru. Nke a dị mma maka oge ma ọ bụ obere oge. Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka iji chọpụta nke ngosipụta kaadiboodu ga-arụ ọrụ kacha mma maka ọrụ gị, biko kpọọ anyị. Anyị ga-enwe obi ụtọ ịkọwa nhọrọ gị ma nye ndụmọdụ ọkachamara.
4) Ngosipụta Raymin na-eduzi nhazi anyị na mbipụta ụlọ. Anyị nwere ikike zuru oke na ogo na ọsọ nke ọrụ ọ bụla ka ị mara mgbe niile mgbe ị ga-enweta usoro gị. Na anyị na saịtị ahụ efere-setter, anyị na-enye na-agba agba àmà n'ime 36 awa. Anyị nwere ihe karịrị 99% na oge oge ruru na arụmọrụ ụlọ anyị kpamkpam. Ngosipụta Raymin na-enye ọtụtụ elele nke mere ka anyị pụọ na asọmpi ahụ.
Dị ka ihe ISO 9001 / FSC / BSCI gbaara ụlọ ọrụ, anyị na ngwaahịa na-ẹkenịmde incredibly elu ụlọ ọrụ ụkpụrụ. Ọ bụla nzọụkwụ nke anyị imewe, n'ichepụta na-ebi akwụkwọ usoro na-enwe rigorous àgwà akara iji hụ na njedebe ga-akarị ihe ị na-atụ anya ya. Tụkwasị na nke a, anyị na-anya isi na ụzọ anyị na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na-eji ihe eji arụ ihe sitere na 100% recyclable material. Ngosiputa kaadiboodu edeputara n'enye ndi mmadu aka. Jiri ihe osise mara mma, njiri mara mma, ngosipụta gị nwere ike ịkwalite azụmahịa gị ma bulie mmata ama. Ha na-enyekwa ihe nlere anya na mkparịta ụka iji nwekwuo njikọ na ụlọ ahịa. Ordertụ gị omenala biri ebi kaadiboodu egosiputa Taa. Were ngwa ahia edepụtara gosipụta ngwaahịa gị site na Ngosiputa Ngwa Ugbu a. Site n'ụdị dị iche iche na nhọrọ nbipute, anyị enwerịrị ọfụma maka azụmaahịa ọ bụla. Bido site na ịrịọ maka atụmatụ taa! Nwere ajụjụ ole na ole gbasara ngwaahịa anyị? Enwere ike ịbanye na anyị.
Nke gara aga: Onyinye Kechie Center kpofuru bins ngosi maka Party ngwaahịa Nchikota
Osote: Smart 3 tier PDQ igbe nkwakọ maka Key yinye, counter ngosi maka ọkụ ahịa
Smart 3 EBIONITISM PDQ nkwakọ igbe maka Key yinye, ...
Ewepụghị juru n'ọnụ Costco Full pallet Display maka Frui ...
Onyinye Kechie Center kpofuru bins ngosi maka Party pr ...
Inogide Cleaner ụlọ udi Pop ngosi maka ...lọ ...
Anọ shelf nke anọ egosipụtara maka Tumblers, dị mfe ...